Ny fepetra nomena diplaoma na ny mpianatra nahavita soa aman-tsara ny fepetra rehetra hifindra avy amin&#39;ny lisea. Ny mari-pahaizana dia misy ihany koa ny mariky ny tanjaky ny diplaoma izay mamaritra raha toa ny nahazo diplaoma nahavita ny fepetra takian&#39;ny diplaoma Indiana 40 faratampony ao ambony ary tsy nahazo fiatoana avy amin&#39;ny fanadinana diplaoma na ireo làlan&#39;ny diplaoma. Ny mpianatra ao amin&#39;ny kôtô efa vita farany indrindra voarakitra an-tsekoly dia tafiditra ao anatin&#39;ny fampandrenesana ny mombamomba ny diplaoma. (Loharanom-baovao: cohort 2018-2019)
Ohatrinona ny tahan&#39;ny diplaoma federaly Indiana?
Ny fepetra nomena diplaoma na ny mpianatra nahavita soa aman-tsara ny fepetra rehetra hifindra avy amin&#39;ny lisea. Ny tanjaky ny diplaoma dia misy fepetra raha nahavita ny fepetra takian&#39;ny diplaoma Indiana Indiana 40 na avo kokoa ny fahazoana diplaoma, ary tsy nahazo fiatoana avy amin&#39;ny fepetra takiana.
Mpianatra nahazo diplaoma ao anatin&#39;ny 4 Taona
Ahoana no ataon&#39;ireo mpianatra Indiana raha ampitahaina amin&#39;ny lasibatry ny vinan&#39;ny fanjakana ho an&#39;ny tahan&#39;ny tahan&#39;ny diplaoma efatra taona sy herin&#39;ny diplaoma?
Ny kendrena interim dia manondro fivoarana ilaina amin&#39;ny fanatrarana ny tanjon&#39;ireo nahazo diplaoma lava amin&#39;ny fanjakana.
Inona no fametrahana diplaoma omena diplaoma Indiana?
Ny fampahalalana momba ny takian&#39;ny diplaoma Indiana dia mety hita ao amin&#39;ny https://www.doe.in.gov/graduation-pathways
Inona ny satan&#39;ny mpianatra any Indiana izay tsy nahazo diplaoma tao anatin&#39;ny efa-taona?
Ireo sokajy ireo dia maneho ireo mpianatra izay mbola ao anatin&#39;ny cohort amin&#39;ny sekoly, saingy tsy nahafeno ny fepetra takian&#39;ny diplaoma talohan&#39;ny 30 septambra tamin&#39;ny taona niandrasan&#39;ny cohort.
Taratasy famaranana ny fampianarana
Taratasy fanabeazana ho an&#39;ny fanabeazana manokana
miala amin&#39;ny fianarana